Kugara KUSVIRA - 802Quits
musha » Vermonters » KUGARA
Wakafadza nekusarudza kugara usina fodya!
Kunyangwe aka ndiko kuedza kwako kwekutanga kana wakasiya nguva zhinji zvisati zvaitika, kugara usina fodya ndiko kwekupedzisira, kwakanyanya kukosha, uye kazhinji chikamu chakaomesesa cheako maitiro. Ramba uchizviyeuchidza iwe nezvese zvikonzero iwe zvawakasarudza kurega fodya. Ziva kuti masipo anogona kuitika, uye hazvireve kuti unofanira kutanga kwese kwese. Nemidziyo yemahara nemazano aripo pano, uri mukana wekugara usina fodya.
Kunakidzwa Kurega Zvishandiso>
Maitiro Ekutarisira Kushuva>